Igama elithi Alvarez Igama kunye nomvelaphi
Lithini Igama Lokugqibela Alvarez?
U-Alvarez uyisimboli esithi "unyana ka-Alvaro." Igama elinikeziweyo elithi Alvaro kucatshangelwa ukuba livela kumaVisigoth , amaqhawe aseJamani ekhulu le-5 abaye bathatha inxaxheba ekuqhekekeni kokugqibela kunye nokuwa kwe-Western empire. IiVigigoth zazingamanye amasebe angundoqo amabini aseMpumalanga yesizwe esibizwa ngokuba yi "Goths."
Ngokutsho kwe-Instituto Genealógico e-Histórico Latino-Americano, igama le-Alvarez lavela eSpain, ngokuyinhloko ukusuka kwimimandla yase-Andalucía, eAragón, e-Asturias, e-Galicia, eLeón nase-Navarra.
U-Alvarez ngowona- 26 ininzi igama eliqhelekileyo laseSpain .
Igama elongezelelweyo Ukuchongwa : ALBAREZ, ALVAROZ, ALVARIZ, ALVARES, ALBAROIZ
Abantu abaPhezulu abanegama elibizwa ngokuthi ngu-ALVAREZ
UCarlos Alvarez - umculi wase-opera waseSpeyin
ULiis Walter Alvarez - waseMerika ozama ukuhlola i-physic, umvuzo weNobel kwi-Physics
ULuis Fernández Álvarez - ugqirha waseMerika kunye nomphandi; umkhulu kaLuis Walter Alvarez
Pedro Alvarez - Umdlali webhola yebhola ye-American MLB yaseDominican
UJosé Álvarez uCubero - umdwebi waseSpanish
I-Chilean Admiral kunye noMongameli waseChile
UGregorio Álvarez - isazi-mlando sase-Argentina, ugqirha nomlobi; U- Alvarezsaurus dinosaur wayebizwa ngokuba nguye .
Kuphi abantu abane-ALVAREZ Igama lomninzi?
Idatha yokusaba ngegama kwi-Forebears i-Alvarez njengenombolo ye-212 eqhelekileyo kwihlabathi, ukuchonga njengento exhaphakileyo eMexico kunye nobunzima obuphezulu kwiCuba. Igama le-Alvarez yi-10 yeyona nkcukacha eqhelekileyo eCuba, yesi-11 e-Argentina kunye ne-16 eSpain.
E-Spain, i-Alvarez ifumaneka ngokuqhelekileyo kwimimandla esenyakatho-ntshona ye-Asturias, ilandelwa yiGalicia neCastille Y León, ngokwe-WorldNames PublicProfiler.
Izibonelelo zoGenesalogy for the Name ALVAREZ
I-Alvarez Crest Family - Akusikho Oko Ucingayo
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto injengekhaya lase-Alvarez okanye iingubo zeengalo ze-Alvarez. Iingubo zeengalo zinikwe abantu ngabanye, kungekhona iintsapho, kwaye zingasetyenziselwa ukusetyenziswa kuphela ngabantu abangenakuphazanyiswa inzala yomntu oye wanikwa ingubo yeengalo.
ALVAREZ Iforum yoLuntu lweGenaalogy Forum
Khangela le bhansela elithandwayo lokuzalwa lomnxeba we-Alvarez igama lokufumana abanye abanokuphanda ookhokho bakho, okanye ukuthumela isicelo sakho se-Alvarez.
Uhlobo lweeNtsapho - ALVAREZ Genealogy
Ukufikelela ngaphezu kwezigidi ezi-2.7 ezirekhodiweyo zembali kunye nemithi yentsapho edibeneyo yomgca othunyelwe kwi-Alvarez igama kunye neenkcukacha zayo kule ncwadana yamahhala yendawo yokuzalwa yemveli eyabanjwe yiCawa likaYesu Kristu we-Saints-Day Saints.
ALVAREZ Igama lomnxeba kunye neeNcwadi zoLondolozo lweentsapho
Olu luhlu lokuthumela ngehhala lwabaphandi begama le-Alvarez kunye neentlobo zalo ziquka iinkcukacha zokubhaliselwa kunye neengxelo zokungcebeleka zemiyalezo edlulileyo.
DistantCousin.com - ALVAREZ Umlando woBomi kunye neNtsapho
Hlola ii-database zolwazi zamahhala kunye neefalo zokuzalwa zohlobo lwegama elingu-Alvarez.
I-Alvarez Genealogy and Family Tree Page
Dlulisa amehlo kwimithi yentsapho kunye neengqungquthela kwiirekhodi zomthonyama kunye neembali zabantu ngabanye abanegama lokugqibela elingu-Alvarez kwi-website ye-Genealogy Today.
Indlela Yokususa Ukugqithwa Kwisibhamu
Indlela yokwenza i-Histogram kwi-7 elula
Amavavolontiya amathuba okufumana abafundi be-High School Students